Abavelisi beminqwazi baseChina kunye nabathengisi | UChapman
Umngundo NO. I-CPM-191009
Inkqubo yokugqiba umphezulu IsiPolish # 600
Izinto zePlastiki I-PP
Icandelo lobunzima 300g
Ubungakanani Icandelo 320mm X 230mm X 210mm
Ubukhulu zomngundo 650 X 600 X 531mm
Igama lomngundo Isigcina-ntloko sebhayisekile
Imbaleki Imbaleki ebandayo yesango lePoint
Izinto zomngundo 1.2343ESR / 1.1730 / 1.2767
Ixesha Lomjikelo Womngundo: Ngama-37
Ukuxhaphaka kweebhayisekile kuqheleke kakhulu kwaye ngakumbi iingxaki ze-neurologic zikhokelela kukhubazeko nasekufeni kuwo onke amabakala obomi. Olu hlaziyo luhlanganisa ezona ziphumo zakutshanje ngokubhekisele kuphando kwicandelo le traumata yebhayisekile edityaniswe nenqaku lokusetyenziswa kwesigcina-ntloko sebhayisikile. Indawo yophando ngeengozi zebhayisikile ngokwendalo inezifundo ezininzi kwaye ayichaphazeli oogqirha kuphela kodwa neengcali zemfundo, ubunjineli, ezomthetho, ukubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye imisebenzi yezempilo yoluntu. Ngenxa yobuninzi beempapasho zehlabathi kunye nezifundo ezizodwa, uphononongo lwexesha elifutshane linceda ukufumanisa umkhombandlela wophando lwamva nje kunye nokubonelela ngolwazi kwiinkalo zommelwane zabaphandi. Kungachazwa ukuba ukuza kuthi ga ngoku, ukuba nangona kwenziwe isixa esikhulu sophando kule ndawo ukuze kuphononongwe ngakumbi ukuvavanya nokuphucula iimeko neemfuno ezizodwa kwimimandla eyahlukeneyo, ubudala, ubuzwe kunye nokwenza iinkqubo eziphumelelayo zokuthintela iintloko ezinzima kunye ukwenzakala ebusweni ngelixa uhamba ngebhayisikile.
Ifoto: Isigcina-ntloko sibusindisa njani ubomi bakho: Xa ungqubeka entloko, iqokobhe elilukhuni elingaphandle (elimnyama) lisasaza ifuthe kwindawo ebanzi. Yonke i-liner yangaphakathi ethambileyo (iorenji) emva koko ifunxa amandla ngokulinganayo (ngethemba) akukho monakalo mncinci entlokweni yakho.Ngaphandle kwesigcina-ntloko, impembelelo iyakugxila kwinxalenye encinci yentloko yakho, ngokunokwenzeka ikwaphule ukakayi lwakho kwaye inokonakalisa nengqondo yakho.
Ekuboneni kokuqala, isigcina-ntloko sikhangeleka ngathi sifana nomnye umnqwazi, kodwa jonga kufutshane kwaye uyakubona ngakumbi ukucinga-kunye nesayensi-iyile kuyilo. Isigcina-ntloko esiqhelekileyo sinamacandelo amabini aphambili: iqokobhe elilukhuni kunye nelayin ethambileyo yangaphakathi. Igobolondo elukhuni lenzelwe ukusasaza amandla eempembelelo kwindawo ebanzi ukuze ukakayi lwakho lunciphe ukuba lungaqhekeka, ngelixa i-liner ethambileyo yenzelwe ukuntywila ngaphakathi kwaye ifumane amandla eempembelelo, kungaphantsi kwayo idluliselwe entlokweni yakho.
Abantu babedla ngokucinga ukuba iminqwazi yokuhamba ngebhayisikile yayingapholi, kodwa yonke loo nto itshintshile ngoku. Awuyi kufumana nawuphi na umdyarho weebhayisikile oqeqeshiweyo endleleni okanye umkhondo ngaphandle kwesigcina-ntloko esiqiniselwe entloko. Kwaye iminqwazi ibhetele kakhulu kunangaphambili. Ngaba ukhe wayiphawula indlela abakhweli beebhayisikile abapholileyo abajongeka ngayo kwiminqwazi ye-chrono emile okweinyembezi? Phantse sonke isigcina-ntloko salemihla si-swish ngokumangalisayo kwaye sinokwenza nabona bacotha abagibeli basike isikhewu. Igama elinye lesilumkiso, nangona. Wonke umntu ufuna ukubonakala emhle, kodwa khumbula ukuba isigcina-ntloko sijolise ikakhulu kukhuseleko. I-Fussy, izinto ezongezelelekileyo zihlala zithengisa nje-ngoko musa ukuchitha imali yakho.
Egqithileyo Iinxalenye Car Ikubumbe
Okulandelayo: Iifilitha zeoyile Iminyinyiva yePlastiki